ဟုန်းပန်းသီးများကို စစ်ကိုင်းသီးအဖြစ် အသွင်ယူ ရောင်းချနေသော်လည်း ရောင်းအားကောင်းနေ - Yangon Media Group
ဟုန်းပန်းသီးများကို စစ်ကိုင်းသီးအဖြစ် အသွင်ယူ ရောင်းချနေသော်လည်း ရောင်းအားကောင်းနေ
စစ်ကိုင်း၊ သြဂုတ် ၂၂
စစ်ကိုင်း ဒေသကြီး စစ်ကိုင်းမြို့မှထွက်ရှိ သည့် တရုတ်ဆီးသီးများ ရာသီကုန် ၍ ဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချနိုင် ခြင်းမရှိတော့သော်လည်း ယင်းအ မျိုးအစားနှင့်တူသည့် ဟုန်းပန်း သီးများကို စစ်ကိုင်းသီးများအဖြစ် အသွင်ယူရောင်းချနေသည့် ဈေး ဆိုင်များအရောင်းတွင် တွင်ကျယ် နေကြကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကိုင်းမြို့တွင် ရှေးအခါ လေခူသီးဟုခေါ်ပြီး ယခုအခါ တ ရုတ်ဆီးသီးပင်များကို စစ်ကိုင်းအ ထွက် ဘူတာရုံအနောက်တောင်ရိုး လမ်းတစ်လျှောက်နှင့် ဧရာဝတီတံ တား (ရတနာပုံ) အဆင်း ကိုးပေ တံတားမှစတင်၍ မန္တလေး၊ မုံရွာ နှင့် ရွှေဘိုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက် ပြူကံအထိ လမ်းဘေးဆိုင်ခင်းကျင်း ရောင်းချကြသည်။
”တရုတ်ဆီးသီးက စစ်ကိုင်း မှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးရောင်းတဲ့ဆိုင် တွေရှိတယ်။ စစ်ကိုင်းသီးက တစ် နှစ်ပတ်လုံးမရှိဘူး။ ဒီရာသီ နှစ်လ လောက်ပဲရှိတာ။ ကျန်တဲ့အချိန် ရောင်းတဲ့အသီးတွေက စစ်ကိုင်း က ထွက်တာမဟုတ်ဘူး။ ပုသိမ် ကြီး၊ တံတားဦးနယ်ဘက်မှာ ကုမ္ပဏီ က ခြံကြီးတွေနဲ့စိုက်တဲ့အသီးတွေ ပါ။ သူတို့အခေါ် ဟုန်းပန်းသီးလို့ ခေါ်တယ်။ ဟုန်းပန်းသီးက တရုတ် ဆီးပင်ရှိတဲ့စစ်ကိုင်းမှာ စစ်ကိုင်းသီး သဘောမျိုး ရောင်းနေကြတာ။ အချိုပေါ့တယ်။ အနံ့ကလည်း စစ် ကိုင်းသီးအနံ့မျိုးမဟုတ်ဘူး။ ယှဉ် စားကြည့်ရင် သိသာပါတယ်”ဟု စစ်ကိုင်းသီးရောင်းချသူအမျိုးသမီး တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
စစ်ကိုင်းထွက် တရုတ်ဆီးသီး မှာ သြဂုတ်လဆန်းတွင် အပင်တွင် လက်ကျန်သီး မရှိသလောက်ဖြစ်နေ သည့်အတွက် လမ်းဘေးဈေးဆိုင် များ၌ရောင်းချနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချိန်တွင် ယင်းနှင့် အမျိုးအစားတူ ဟုန်းပန်းသီးများ ဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချနေခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်ကိုင်းထွက် တရုတ်ဆီးသီး မှာ စတင်ပေါ်ချိန်က တစ်ပိဿာ ကျပ်သုံးထောင်ဈေးရှိပြီး အသီးလှ ပါက ကျပ်လေးထောင်အထိဈေးရ ကာ ဟုန်းပန်းသီးများမှာ တစ်နှစ် ပတ်လုံးထွက်ရှိ၍ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စစ်ကိုင်းဈေးကွက်တွင် ရောင်းချ နေကြောင်း သိရသည်။
ရွှေကျင်မြို့နယ်မှ ရေဘေးသင့်ပြည်သူ ၃ဝဝ ကျော်ကို သဘာဝခေါ်သံဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဆေးကုသမှုပေး၊ ကျန??
‘ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ’ ပါ အချို့အချက်များကို ပြောင်းလဲပေးရန
စစ်တွေတွင် စရဖ တပ်ကြပ်တစ်ဦး၏ ဦးခေါင်းအား သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရ၍ သေဆုံး တရားခံအား ဖမ်းဆီးရ?
အခွန်မပေးဆောင်ရသေးသော စီးကရက်ဘတ် ၁၁ သန်းဖိုး ထိုင်းတွင်ဖမ်းမိ
ကချင်ပြည်နယ်၌ ငါးပေါက်သီးအထွက်နည်း၍ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေ
ရွှေ့ပြောင်း ဒုက္ခသည် ကလေးများအတွက် ဒေါ်လာတစ်သိန်း လှူဒါန်းခဲ့သော ဂျော့ကလူးနီတို့ ဇနီးမောင်န